Nyein Family: SQL : How to generate XML in MSSQL ( table => xml )
we eat. we travel. we share.
SQL : How to generate XML in MSSQL ( table => xml )
I. Table Design
II. Case I
(a) XML format which has sale voucher header and detail information
<Remarks>SAFRA MEMBER DISCOUNT</Remarks>
<ItemName>PENTA TISSUE BOX</ItemName>
<ItemName>COLGATE MOUTH WASH</ItemName>
(b) SQL query to generate above xml format
declare @voucherno as varchar(20)
set @voucherno = 'SG0234234'
SELECT V.VOUCHER_NO as [Head/VoucherNo]
,V.SALE_DATE as [Head/SaleDate]
,V.COUNTER_NO as [Head/CounterNo]
,V.CASHIER_NO as [Head/CashierNo]
,V.CUSTOMER_NO as [Head/CustomerNo]
,V.REMARKS as [Head/Remarks]
SELECT I.ITEM_NO as [Item/ItemNo]
,I.ITEM_NAME as [Item/ItemName]
,cast(I.ITEM_PRICE as decimal(10,2)) as [Item/ItemPrice]
,I.ITEM_QTY as [Item/ItemQty]
,I.ITEM_REMARK as [Item/Remark]
FROM SALE_VOUCHER_ITEM I
WHERE I.VOUCHER_NO = @voucherno
FOR XML PATH(''),Root('Body'), TYPE
FROM SALE_VOUCHER V
WHERE V.VOUCHER_NO = @voucherno
FOR XML PATH(''), ROOT('Sale')
II. Case II
(a) XML format which displays sale voucher header and detail information, some header info is displayed at detail level
,( SELECT V.CUSTOMER_NO as [CustomerNo]
,V.REMARKS as [Remarks]
,cast(I.ITEM_PRICE as decimal(10,2))
FOR XML PATH('Body'),TYPE
By ငြိမ်းမိန်းကလေး at March 28, 2014
Labels: Database, IT
ပီနန်ကျွန်း၊ မလေးရှားနိုင်ငံ။ အောက်တိုဘာ ၆ ရက်မှ ၉ ရက်။ စနေ၊ တနင်္ဂနွေ၊ တင်္နလာ၊ အင်္ဂါ။ ဒီလိုတွေ စီစဉ်ကြတာ။ ဒီခရီးကတော့ သွားခါနီး ၂ ရက်အ...
အခန်း(၁) စုငယ်တစ်ယောက် ဧည့်ခန်းဆိုဖာပေါ်ထိုင်ကာ သိုးမွေးထိုးနေရင်း နံရံပေါ်မှ နာရီကို မော့ကြည့်လိုက်သည်။ ဖေဖေနဲ့ ကိုကိုတောင် ပြန်လာချိ...
ပြည် ဘုရားဖူး သွားကြမယ် (၁)
၂၆ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၅ ရွှေတောင်၊ ပြည်၊ သရေခေတ္တရာ။ ပြည်မြို့ ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်တု ဒီတစ်ခေါက်မြန်မာပြည်ပြန်တာ အရမ်းတန်တယ်လို့ ခံစားရပါတယ်။ ကိုယ်သ...
ပြည် ဘုရားဖူး သွားကြမယ် (၂)
၂၇ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၅ အကောက်တောင် ၊ ထုံးဘိုတစ်ဖက်ကမ်း။ ပြည်မြို့မှ ထုံးဘိုမြို့သို့ မနက်စောစောထပြီး ဟိုတယ်မှာပဲ မနက်စာစားလိုက်ပါတယ်...
စာဖတ်တာ သီချင်းနားထောင်တာ ၀ါသနာပါတယ် ခရီးသွားရတာကို နှစ်သက်တယ်၊ အဓိက ခရီးသွားမှတ်တမ်းလေး ရေးချင်လို့ ဒီဘလော့ကို စတင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရေးဖြစ်နေတာက ဟင်းချက်နည်းတွေ။
SQL : How to generate XML in MSSQL ( table => xml ...
ကိုရီးယားခရီးစဉ် Day 1
လွန်ခဲ့သော ၅နှစ်၊ ဒီနေ့မှာ ကိုယ်တို့လက်ထပ်ခဲ့တယ်
Berjaya Hills Trip (2)
Cameron Highlands Trip (3)
Kuala Lumpur Trip (3)
Saigon Trip (4)
South Korea Trip (9)
ကျိုက်ထီးရိုး ဘုရားဖူး (1)
ပြင်ဦးလွင် ခရီး (5)
My Valentine..... - ကျွန်မဟာ တနေ့သူနဲ့ခွဲခွာရမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘယ်လိုမှခံစားရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ (သူနဲ့ကတောက်ကဆဖြစ်တိုင်း) တကိုယ်တော် ရင်ထဲဟစ်ကြွေးထားဖူးခဲ့ပေမယ့် တကယ်တမ...
ချစ်ကပြောတယ် - ချစ်ကပြောတယ် ကြယ်တွေဆီသွားတဲ့လမ်းကို ငါ သိတယ် တဲ့ ဓမြေကမ္ဘာကနေ ငေးမော့နေရုံ ကျောပေးထားတဲ့ကြယ်ကလေးကို လွမ်းဆွတ်နေရုံ ပဲတဲ့ ။ မျှော်ငေးကြည့်ရုံလေးနဲ့ ချစ်ခဲ့ဖ...